MX လျှပ်တစ်ပြက် - ကိုယ်ပိုင်နှင့်တပ်ဆင်နိုင်သော MX Linux Respin ကိုမည်သို့ဖန်တီးရမည်နည်း။ | Linux မှ
အကြောင်းကိုအသည်းအသန်နေသောငါတို့များစွာသည် Linux လောက၎င်းကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်ရုံသာမကကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေရန်အတွက်အကြိမ်များစွာပါရှိသည် GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း ၎င်းကိုဖန်တီးရန်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုစံပြနည်းလမ်းတစ်ခုဖြင့်ရှာဖွေခြင်း LFS (Linux မှခြစ်ရာ) သို့မဟုတ်အခြားကြီးမားသောအစိုင်အခဲဖြန့်ဖြူးမှု၏အခြေခံအနေဖြင့်၊ Debian၊ Ubuntu၊ Fedora နှင့် Arch တို့ဖြစ်သည်.
အကယ်စင်စစ်ဤသည်များသောအားဖြင့်လိုအပ်သည် နက်ရှိုင်းသောအသိပညာ နှင့်အသုံးပြုမှု အထူး software tools များသာမန်နှင့်ပျမ်းမျှကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူ (ရုံး / အုပ်ချုပ်ရေး) တွင်ပုံမှန်အားဖြင့်မရှိပါ။ သို့သော် MX Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်းကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏပြောလေ့ရှိသည့်အသုံးဝင်သော၊ ရိုးရှင်းပြီးထိရောက်သော application တစ်ခုရှိသည် MX လျှပ်တစ်ပြက်မည်သည့် Linux သုံးစွဲသူကိုမဆိုကိုယ်ပိုင်၊ တပ်ဆင်နိုင်သော MX Linux Respin ဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။
နားလည်သည် ပြန်စပါ။တစ်ဦး bootable (live) နှင့် install လုပ်နိုင်သော ISO ပုံရိပ် ၎င်းကို restore point, storage medium နှင့် / သို့မဟုတ်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည် GNU / Linux ကိုပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးဖြန့်ဖြူး အခြားသူတွေအကြား။ ထို့ကြောင့်ဤကိရိယာသည်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကိုခေတ်မီ။ အကျိုးရှိစွာအစားထိုးသည် «Remastersys y Systemback», ဒါပေမယ့်သင်သာအပေါ်အလုပ်လုပ်တယ် Native distro, IE, MX Linux ။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, MX Linux လက်ရှိတွင်လည်းဟုခေါ်တွင်အခြား software ကို tool ကိုပါဝင်သည် «MX Live USB Maker (Creador de USB Vivo MX)» အဘယ်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ဖြစ်ပါသည် «Imagen ISO» လက်ရှိ, စိတ်ကြိုက်နှင့် optimized Operating System ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Usuario Linux တစ်ခုကျော် «Unidad USB».
ပေါ်မှာဤအချက်အလက်အားလုံးကိုချဲ့ထွင်ရန် MX Linux နှင့်၎င်း၏ Tools များအောက်ပါကိုနှိပ်ပါ link ကို နှင့် / သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏အောက်ပါဆက်စပ်စာပေများကိုဖတ်ပါ။
1 MX လျှပ်တစ်ပြက် - လျှပ်တစ်ပြက်ကိရိယာ
1.1 MX Snapshot မသုံးမီယခင်အဆင့်များနှင့်အကြံပြုချက်များ
1.2 MX Snapshot ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ။
MX လျှပ်တစ်ပြက် - လျှပ်တစ်ပြက်ကိရိယာ
MX Snapshot မသုံးမီယခင်အဆင့်များနှင့်အကြံပြုချက်များ
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနှင့်အကြံပြုအဆင့်များaဘို့ဖြစ်ကြ၏ MX Linux အသုံးပြုသူ ပြီးနောက် ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ရန်၊ ပြုပြင်ရန်၊ su Distro MX Linux သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာတစ်ခုအနေဖြင့်၊ ပြန်စပါ။ အခြားအရာတွေကြားမှာ \_ t လျင်မြန်စွာ restore ပြန် မူရင်း Distro ကိုခြစ်ရာကနေရှောင်ရှားခြင်းနှင့်ထပ်မံစတင်ရန်လိုအပ်ခြင်းကိုတားဆီးသည့်မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မတူညီပါ။ ဒါမှမဟုတ်အမှု၌, သင်ချင်တယ် သင်၏ Respin ကိုအခြားသူများနှင့်မျှဝေပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ပတ် ၀ န်းကျင်မှာရှိတဲ့အသိုင်းအ ၀ ိုင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးတာပါ။
မလိုအပ်သောအရာအားလုံးကိုကိုယ်တိုင်ဖျက်ပစ်ပါဖြေ - ငါ / / home / …»လမ်းကြောင်းရှိလက်ရှိဖိုလ်ဒါများထဲမှငါသာသိမ်းဆည်းရန်နှင့် / သို့မဟုတ်အခြားသူများနှင့်မျှဝေချင်သောသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်သို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ဖိုင်များကိုသာထားခဲ့သည်။ ဖိုင်များနည်းလေလေ၊ ထုတ်လုပ်လိုက်သော ISO နည်းလေလေဖြစ်သည်။ application များနည်းတူ application များနည်းလေလေသေးငယ်လေလေ USB Memory Drives များ၌ download နှင့်အသုံးပြုရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ISO အရွယ်အစားကိုထိန်းသိမ်းထားလေလေဖြစ်သည်။
ပိုလျှံမှုအားလုံးကိုအလိုအလျောက်ဖျက်ပါဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်အောက်ပါ MX Linux application များနှင့်အခြားပြင်ပ application များအသုံးပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ MX Cleanup (MX Cleaning) နှင့် BleachBit ။ ဖြစ်နိုင်သမျှနှစ်ခုလုံးကိုအများဆုံးသန့်ရှင်းနိုင်သည့်စွမ်းရည်ဖြင့်သုံးပါ။ နောက်တစ်ခုကိုသင်၏ပုံမှန်အသုံးပြုသူ mode တွင် "root" အဖြစ်အသုံးပြုပါ
မလိုအပ်သောဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးကို Disable / Disableဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်အောက်ပါ MX Linux application များနှင့်အခြားပြင်ပ application များအသုံးပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ XFCE အတွက် "Configuration Menu" ၏ "Session and Start" ၏မူရင်း application နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သော External Stacer application ။ ။ ထို့အပြင် Stacer သည်“ System Cleanup” option တွင်မှတ်တမ်းဖိုင်များ (* .log) ကိုအကောင်းဆုံးဖြုတ်ပစ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
အသုံးပြုသူဆက်တင်များနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုများကိုသိမ်းပါ: အကယ်၍ သင် Respin တွင်ဖန်တီးရန်အသုံးပြုသူများအသစ်တွင် MX Linux အသုံးပြုသူတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အရာသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်အမွေဆက်ခံလိုပါက၊ သင်သည်လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိလိုအပ်သောဖိုင်တွဲများနှင့်ဖိုင်များကိုနေရာချရမည်။ myuser / »လမ်းကြောင်းအတွင်းရှိ / / etc / skel ဥပမာ:
သင်လိုအပ်သည်ဟုယူဆသောအခြားမည်သည့်ဥပမာမဆို .conky, .fluxbox, .kde၊
သင်လိုအပ်သည်ဟုယူဆသောအခြားမည်သည့်ဥပမာမဆို .wbar, .xinitrc, .xscreensaver ။
MX Snapshot ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ။
အသုံး MX လျှပ်တစ်ပြက် တကယ်ကိုအရမ်းကိုလွယ်ပါတယ် ဖွင့်သည် (ကွပ်မျက်သည်) သည်၎င်းသည်ကန ဦး မျက်နှာပြင်တွင်အောက်ပါဖော်ပြချက်ကိုဖော်ပြသည်။ ၎င်းကိုချက်ချင်းအထက်ပုံတွင်တွေ့နိုင်သည်။
/ root (ရှိ) နေရာလွတ်ဖြေ - compress လုပ်ဖို့ OS တခုလုံးမှာနေရာဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာပြသဖို့။
/ အိမ်တွင်နေရာလွတ်ဖြေ - OS Home တွင်နေရာလွတ်ရရှိနိုင်မှုကိုပြသရန်
ပုံတည်နေရာ- ပုံမှန်လမ်းကြောင်းကိုပြရန်နှင့် / သို့မဟုတ် ISO ကိုဖန်တီးမည့်နေရာကိုဖော်ပြရန်။
ပုံ၏အမည်ISO ဖန်တီးရန်အတွက် - default name ကိုပြရန်နှင့် / သို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဖော်ပြရန်။
နောက်မျက်နှာပြင်တွင်ချက်ချင်းအပေါ်ဆုံးပုံတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းဖန်တီးထားသောအသုံးပြုသူ၏မည်သည့်ဖိုလ်ဒါကိုအရန်ကူးလိုခြင်းမဟုတ်ကြောင်းညွှန်ပြရန်ခွင့်ပြုသည်။ «အကောင့်များထိန်းသိမ်းထားသည် (ကိုယ်ပိုင်အရန်အတွက်)။ ဤရွေးချယ်မှုသည်ဖန်တီးထားသောအသုံးပြုသူအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ရရှိနိုင်ရန်ခွင့်ပြုသည် ပြန်စပါ။ နှစ် ဦး စလုံး mode မှာ « En vivo » (တိုက်ရိုက်) အတူတူ install လုပ်သည့်အခါအဖြစ်။
အမှု၌, ထို option ကိုရွေးချယ်သည် "ပုံမှန်အကောင့်များအားပြန်လည်ထားရှိသည် (အခြားသူများသို့ဖြန့်ဝေရန်)"မည်သည့်အကောင့်ကိုမျှသိမ်းဆည်းခြင်း (ကူးယူခြင်း) မပြုရပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဤရွေးချယ်မှုသည်စကားဝှက်များကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးလိမ့်မည် "သရုပ်ပြ" y "Root" အတွက် default အနေဖြင့်ထည့်သွင်းသောသူတို့အား MX Linux.
ထို့အပြင်ခုနှစ်, MX လျှပ်တစ်ပြက် အောက်ပါချုံ့အစီအစဉ်များကိုကမ်းလှမ်း: lz4, lzo, gzip နှင့် xzISO ကိုထည့်သွင်းရန်ဖိုင်များကိုချုံ့ရာတွင်အဆုံးသည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။
ကြွင်းသောအရာအဘို့, ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် «လာမည့်»ခလုတ်ကို ISO ကိုဖန်တီးပြီးအဲဒါကို DVD (သို့) USB သုံးပြီးကူးယူနိုင်တယ် MX Live USB ပြုလုပ်သူ မှ MX Linuxသို့မဟုတ် Balena Etcher၊ Rosa Image Writer၊ Ventoy သို့မဟုတ် command "dd" အခြားမည်သည့်ထံမှ GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်းသို့မဟုတ် ရုဖု မှ Windows ကို.
မှတ်ချက်ဖြေ - လိုချင်ရင် တည်းဖြတ် (စိတ်ကြိုက်) ၏ရွေးချယ်မှုများ စတင်မီနူး (boot) Respin အသစ်၏ဖိုင်ကိုပြင်ဆင်ရပါမည် mx-snapshot.conf ဖိုင်ကိုတည်းဖြတ်ပါ လမ်းကြောင်းကဘာလဲ "/ etc" နှင့်ထား option "edit_boot_menu" en "ပြီးတော့အဲဒါ"။ ဆိုလိုသည်မှာပြင်ဆင်ရန် ၀ င်းဒိုးသည်အမြဲတမ်းရှိလိမ့်မည် ဖိုင်« isolinux.cfg » တည်းဖြတ်နိုင်သည့်နေရာ၊ ဥပမာ၊ Respin စတင်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကြိုက် Respin ၏အမည်အသစ်သည်အစား၊ "MX Linux" အရာကပုံမှန်အားဖြင့်လာပါတယ်။
သင်ပိုမိုသိလိုလျှင် MX Linux respin အောက်ပါလင့်ခ်များကိုနှိပ်ပါ
MX Linux ဖိုရမ် - MX Desktop Respins (စာရင်း)
MX 19.2 အခြေပြု Edition ကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာ Respin
Sourceforge - ရပ်ရွာ Respins
ဒီမှာကအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန် တရားမဝင် MX Linux Respin ကိုခေါ် အံ့ဖွယ်အမှုများယခင်စီမံကိန်းကိုအစားထိုးခဲ့သောစီမံကိန်း မိုင်းလုပ်သားများ အခြေခံ Ubuntu ကို 18.04 သုံးပြီး နေပြည်တော်။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" ဇာတိ tool ကိုအကြောင်းကို MX Linux ခေါ်ဆိုခ «MX Snapshot»ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်တပ်ဆင်နိုင်သော MX Linux Respin ကိုဖန်တီးရန်အလွန်ကောင်းမွန်သော software utility တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည် restore point, storage medium နှင့် / သို့မဟုတ် distribution ကဲ့သို့အသုံးပြုနိုင်သော bootable ISO image (live) ဖြစ်သည်။ တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » MX လျှပ်တစ်ပြက် - ကိုယ်ပိုင်နှင့်တပ်ဆင်နိုင်သော MX Linux Respin ကိုမည်သို့ဖန်တီးရမည်နည်း။
ဆိုလိုတာကကျွန်တော့် pc မှာ install လုပ်ထားတဲ့ linux distro ပုံတွေမဖန်တီးနိုင်ဘူးလား။
မင်္ဂလာပါ, RocoElWuero ။ မဟုတ်ပါ၊ ဤကိရိယာသည် MX Linux အတွက်ဇာတိဖြစ်သည်၊ အခြား Distros များတွင်အလုပ်လုပ်ရန်တည်ဆောက်ထားခြင်းမရှိသေးပါ။ ဘယ်, ပြုလျှင်, ၎င်း၏အလွန်ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်လက်တွေ့ကြောင့်ထူးခြားသောပါလိမ့်မယ်။
Mx18.3 ကွန်နက်ရှင်နှင့်အပြည့်အဝနားလည်မှုရှိခြင်းသည် MX19.3 တွင်ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ISO နေ့စွဲအတိုင်းအတာတစ်ခုအနေဖြင့် Festplatte installieren ohne das es ပြmeနာရှိသည့် MX ၁၉.၃ ။ Schnappschuß erstellen und erhallte foraeine funtionierende ISO Datei auch start inabis inapunkt abläuft, mich loginame und Passwort fragt, Installprogramm dach, dich erich, dichichicht, dichichicht dichicht Installer programme သည်၎င်းသည် Dollerzeich နှင့် dichicht ။ nicht weiter ... aber wie gesagt nur bei mx19.3 bei
mx 18.3 အခွင့်အလမ်းများ Festplatte installerren - bex mx 19.3 geht dich erscheint das Install ကိုဤအစီအစဉ်ကို install လုပ်ဖို့ Festplatte installieren - bex mx XNUMX geht dich nicht ဦး ထုပ် nicht einmal geklappt သည်ဤကဲ့သို့သော Dollerzeichen eingeben ??? Bitte helft mir ich သည် MX Linux einfach သေဆုံးမှုကိုတွေ့ရှိသည်။ Danke
Ronald K. ကိုအကြောင်းပြန်ပါ
Grüße, ရော်နယ်အောင်နိုင်။ Ich habe သည် nicht ganz verstanden ဖြစ်သည်။ MX Linux 19.3 တွင် Respin (live und installierbarer Snapshot) ရှိသည့် Milpin များ၊ MilagrOS များနှင့်ပြProbleနာများရှိသည်။ ဤပြသနာသည် IHR ပြpinနာဖြစ်သည်။ MX Linux တွင် Das, glaube ich, « root »သို့မဟုတ်« root »အစရှိသော Standardwennwort sein sollte မှဖယ်ထုတ်ထားသော Kennwort အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ဤသည်ကိုရေဒီယိုကထိန်းချုပ်ထားသည်။ ဟုတ်ကဲ့, ob is nützlich sein wird, aber dies ist URL URL meines Respins, ragrag Sie is erforschen und sehen möchten, wie is nützlich sein kann: https://proyectotictac.com/distros/
ရော်နယ်အောင်နိုင်နှင့်နှုတ်ဆက်သည်။ ကျွန်တော်သိပ်နားမလည်ဘူး သို့သော်ကျွန်ုပ်တွင် MilagrOS ဟုခေါ်သော MX Linux 19.3 ၏ကိုယ်ပိုင် respin (live နှင့် installable snapshot) ရှိသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ပြworksနာမရှိဘဲအလုပ်လုပ်သည်။ မင်းရဲ့ပြproblemနာကဘာလဲဆိုတာအတိအကျမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်ချိန်မှာမင်းရဲ့ respin ကသင့်ကိုစကားဝှက်တောင်းလိုက်ရင်၊ ဒါကပုံမှန်အားဖြင့် "demo" ဒါမှမဟုတ် "demo" လို့ထင်တဲ့ MX Linux မှာဖြစ်သင့်တယ်။ "root" မဟုတ်လျှင်၎င်းသည် respin မတိုင်မှီအသုံးပြုခဲ့သောသူကိုသင်သတ်မှတ်ထားသင့်သည်။ ဒီဟာကအသုံးဝင်မလားမသိဘူး၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုစူးစမ်းလေ့လာပြီးဘယ်လိုအသုံးဝင်တယ်ဆိုတာကြည့်ရင်ဒီဟာကကျွန်တော့်အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်။ https://proyectotictac.com/distros/